zimbabwe – Abusidiqu
The devastation that accompanied Cyclone Idai, which ravaged Zimbabwe earlier this year, was so enormous that Nigeria could not afford to look the other way, and had to offer a helping hand. President Muhammadu Buhari disclosed this Thursday at State […]
Zimbabwe has announced former President Robert Mugabe’s birthday a public holiday, a state daily reported this on Monday, nearly a week after the long-time ruler stepped down. “It is hereby declared that February 21 of every year henceforth shall be […]
Mr. Emmerson Mnangagwa, has been sworn in as President of Zimbabwe, following the exit of Robert Mugabe who ruled the country for four decades. Taking his oath of office, the 75-year-old former security chief known as ‘The Crocodile’ vowed to […]
As President Robert Mugabe resigns, today marks a new dawn in the history of Zimbabwe. The happiness of Zimbabweans can be widely seen through the jubilations on the streets of Harare. Zimbabweans are the true winners as they witnessed the […]
A young girl has been killed by a lion while relieving herself at night at the back of a hut in a rural part of Zimbabwe, a police spokesman told the state-linked Chronicle newspaper. The aunt of the little girl, […]
Mugabe Doesn’t Sleep At Functions, He Rest His Eyes From Bright Lights Says Spokesman
Zimbabwean President Robert Mugabe, 93, is not asleep when he closes his eyes for long periods in public events but is resting his eyes from bright lights, his spokesman said Thursday. Mugabe has regularly had his eyes closed at recent […]
Following the ouster of the despot Yahaya Jammeh of the Gambia, the notion that change will happen for nations with sit-tight leaders has been reinforced. From Cameroon to Uganda, Angola, Equatorial Guinea and of course Zimbabwe where the 94-year-old Robert Mugabe who has ruled […]
Zimbabwe has reacted angrily to Nigerian journalists who ambushed President Robert Mugabe during last week’s inauguration of Muhammadu Buhari as Nigeria’s president. Journalists identified as reporters from Sahara Reporters ambushed Mugabe and his African Union (AU) delegation demanding that he […]
Boko Haram Reportedly In Zimbabwe En Route South Africa
Nigeria’s jihadist group, Boko Haram, is in Zimbabwe and could soon reach South Africa, reports the UK-based news outlet ZimEye, citing Zimbabwe’s national intelligence agency. According to the Zimbabwean news website, the Central Intelligence Organisation (CIO) issued an intelligence report, […]